Umatshini weNkxaso we-Ankle-Abavelisi beenkxaso kwi-China Ankle, abaXhasi
Silicone nylon ankle inkxaso
Inkxaso ye-ankle isetyenziselwa ukukhusela okanye ukunciphisa iintlungu ngenxa yokuncipha kwemisipha kunye nokulimala. I-silicone anti-skid strip ephindwe kabini, iTekhnoloji ye-3D enemilinganiselo emithathu yokuluka, ukhuseleko lwe-silicone mat kabini, ukuphefumla ukuphefumla uyala ukugcuma. Inokuthintela ngokufanelekileyo ukulimala kwe-ankle edibeneyo ngexesha lokuhamba kwaye ikhusele ngokufanelekileyo izihlunu kunye nokudibana kwe-ankle.
Isiqwenga esinye se-ankle esonga inkxaso
Izixhobo zenziwe ngezinto ezingalunganga zinwele ezigqibeleleyo ziyimveliso ye-SBR yokuntywila. Obu buchule busebenzisa inaliti ezine kunye nomtya onemigca emithandathu kunye nezithuthi ezinomlomo ongasentla kunye nezantsi ezinemikhombe kwaye zikhululekile ukunxiba. Isikhuseli se-ankle sisetyenziselwa ukomeleza ukukhusela i-ankle edibeneyo. Le modeli yamkela indlela yokunxiba eluhlobo oluvulekileyo, enokulungiswa ngokobungakanani bamaqatha.
Ilaphu elikhethekileyo, uyilo olunokuphefumla olufunxayo sweatshi kwaye igcina iinyawo zakho zomile kwaye zirhabaxa. Inkxaso efanelekileyo yokunyangwa kwemisipha, uyilo olukhethekileyo lobugcisa oludibanisa amalungu ahlukeneyo. Iqinile kwaye yomelele, ikhusela umkhono wesaladi ukuhla ukuya ezinyaweni. Ukukhuselwa okugcweleyo kunciphisa i-ankle swill ekunciphiseni isithende, kuthintela kwaye kunciphise iintlungu ze-plantar fasciitis.
I-Ankle brace ngomtya
Izinto zokudibanisa eziguqukayo ze-neoprene, ukuya kuthi ga kwi-11 '' kwiinyawo ze-arch. Uyilo lwesithende esivulekileyo, olulungele ezangaphakathi nangaphandle kwezemidlalo, zibonelela ngenkxaso kwii-ankle tendons kunye nokudibana. Izinto ezinokuphefumla ezinokugcina ubushushu kwaye zithintele ukucaphukisa ulusu. Ukuthuthuzelwa, ukuguquguquka, ukuhlala ixesha elide kunye nokuhlamba, ulusu oluhle nolusu oluphezulu.
Yenziwe nge-neoprene, i-elastiki, yomelele kwaye inokuphefumla kunye neempawu zokuomisa ngokukhawuleza. Ke unokunxiba i-ankle stabilizer ukhululekile ukuchitha usuku. Iidigri ezingama-360 ezijikeleze inkxaso ye-ankle, ukuzinza, inkxaso eyomeleleyo. I-ankle brace enezinto eziqinisiweyo zecala kunye noyilo lwe-arch luyayinciphisa ngokukhawuleza intlungu kunye noxinzelelo kwi-ankle.
Uxinzelelo lwe-ankle ephindwe kabini
Ukucaciswa: Izixhobo zeNeoprene Ubungakanani S, M, L, XL Colour Complexion Function Umsebenzi ukukhusela i-ankle, gcina ufudumele kwaye ukhuselekile Ukuphakama 1.Concise 2.Flexible 3.Durable 4.Ukuziphatha kakuhle 1.Ukuxhaswa kwe-ankle ye-ankle kukubonelela ngenkxaso ku-2.Helps to Inkxaso yenqanawa